DOWNLOAD Onye Ugwu North Rock Rock OV-10D USMC & CAP FSX & P3D - Freeware
Rockwell OV-10D Bronco na agba nke United States Marine Corps (USMC) na Civil Air Patrol (CAP: enyemaka ndị nkịtị nke US Air Force). Ihe ngosi 3D ghọrọ nke ala FSX usoro site na LLS. Prepar3D v4 dakọtara, gụnyere ụda ọdịnala, udiri ederede dị elu, ihe na-akpali akpali, na-ahụ maka ọdịnala. Ekele Chris Evans maka nyocha.
Banyere ezigbo ụgbọelu:
The Bronco OV-10 bụ ọgụ ụgbọelu agha, nyocha na nduzi ụgbọelu nke North America. O tinyewo aka, na ihe ndị ọzọ, Agha Vietnam na ọgụ megide ndị na-azụ ahịa ọgwụ ọjọọ na Colombia ruo 2015. E mepụtara OV-10D mbipute maka US Marine Corps na ọrụ nche abalị.
OV-10D nwere nkwonkwo dị mma, pylons nke nwere ike iburu nkata rocket, flares, ịda ma ọ bụ bọmbụ na-eduzi laser, na tankị ndị ọzọ. A FLIR AN / AAS-37 nke Texas Instruments wuru na onye na-emepụta laser bụ nke a na-etinye n'ime ụlọ dị na imi nke ụgbọelu ahụ. Nke a nwere ike jikọọ na egbe elu M97 20 mm nke a na-agbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri n'okpuru fuselage kama nchara ngwugwu OV-10A. Ejiri ihe nyocha APR-39 nyocha na ịdọ aka ná ntị na-akwado ya, ALE-39 decoy launchers na usoro nkwụsị ọkụ gas. (Akaụntụ Wikipedia).
downloads 9 132
kere 9 Feb 2018
emelitere 29 Aug 2018
Lockheed Martin Prepar3D v1 ka v5 ➕ Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition ➕ Microsoft Flight Simulator X Acceleration ➕ Microsoft Flight Simulator X SP2
Ihe atụ mbụ site n’aka Tim Conrad, FSX usoro nke asụsụ site na LLS, Kpọkọtara ma degharịa site n’aka Chris Evans, onye Ken Glazer rụkwaa ya